Vaovao - Fa maninona ny lehilahy no mampiasa borosy fiharatana rehefa mankafy ny fotoana fanaratsiana?
Fony aho mbola tanora, dia hanaraka ny olon-dehibe mankany amin'ny barberhops nentim-paharazana notontosain'ny fanjakana aho, satria mbola tsy nitombo volombava akory tamin'io fotoana io, ary tsy nanana fluff akory aho, ka mbola manana fahatsiarovana lalina ny fizotran'ny fiharatana ny olon-dehibe mandry.
Sahabo ho toy izao ny dingana, maka lamba famaohana mafana aloha ary aforeto ny molotra mba hanalefaka ny volombava. Mandritra izany fotoana izany dia manodinkodina ny borosy kely ao anaty lovia kely ny mpanao volo, ary be dia be ny vombony hivoaka afaka kelikely, avy eo raiso ny lamba famaohana ary apetaho eo amin'ny saokany, molotra sy tarehy izany. Taorian'ny fampiharana dia namoaka ilay hareza mahitsy mamirapiratra ilay mpanety ary nanosotra azy tamin'ny lamba teo amin'ny rindrina imbetsaka nefa tsy nihazakazaka alohan'ny nanombohany namely ilay tarehy be volo, vetivety. Hiresaka amin'ny mpanjifa na olona eo akaikiko ihany koa aho.
Ny dingana iray manontolo dia toa mitandrina sy tsy mitandrina. Na tanora na antitra, dia tena mahay sy mora azo ilay mpanaratra, toy ny tarehy miloloha. Rehefa voaharatra ny tarehy dia toa fotsy sy malefaka ny tavan'ny mpanjifa ary feno famirapiratana. Ny mpanjifa rehetra izay vao niharatra dia hahatsapa ho afa-po amin'ny fitaratra ary hikasika ny saokany, feno fahatokisan-tena, toa ny fahaterahan'ny Pan An, miaraka amina firazanana miavaka.
Tena fahafinaretana io, nieritreritra an'izany foana aho tamin'izaho mbola kely.
Rehefa lehibe aho, ny karazan-karazan-java-boaharatra rehetra sy fanary rehetra nanjary be mpitia, na aiza na aiza no misy ny salon de volo mandehandeha, ary mihena ihany koa ireo mpivarotra mpanety efa taloha, ary afaka miankina amin'ny tenanao fotsiny ianao mba hankafy fiharatra.
Maninona no atao borosy fiharatana:
Ny gadona maoderina dia haingana kokoa noho ny teo aloha. Miharatra isaky ny maraina, ahoana no hahitana fifandanjana eo amin'ny fahombiazana sy ny fampiononana? Ny borosy fiharatana manara-penitra sy savony manaratsy kalitao no tena ilaina amin'ny lehilahy mba hankafizany ny tenany. s zavatra.
1. Mamorona boka manan-karena sy matevina ampy hanaronana ny volombava.
2. Diovina ny diloilo sy ny loto amin'ny volombava.
3. Atsaharo ny volombava, ataovy mando kokoa ny hoditra, ary sorohina ny fahasosorana sy ny fahasimbana amin'ny hoditra rehefa tsy mandomando ny hoditra.
4. Fitrandrahana malefaka.
5. Atsaharo ny gadona, izay koa ny antony lehibe indrindra. Manam-potoana kokoa hanalefaka ny volombava, hahamora ny manaratra azy, amin'izay afaka mankafy ny fizotrany ianao.
Raha ny marina, raha te-hamonjy olana sy tsotra ianao dia tsy mila borosy fiharatana, raha mbola tsy mampiasa savony fiharatana. Amin'ny ankapobeny dia tsy misy afa-tsy crème cureure qualité somary avo lenta ihany no ilaina. Ampiasao ny rantsan-tànanao hametahana izany amin'ny tavanao ary manotra azy antsasak'adiny hatramin'ny iray minitra. Izy io koa dia afaka mamokatra sombin-javatra matevina kely. Ny vinavina dia ny volombava tsy dia matevina, matanjaka be ary tsy lava loatra. Izany fotsiny dia tsy afaka mahatratra ny vokatry ny exfoliating sy mampiadana ny gadona, ary tsy mahazo aina loatra. Mamelombelona tokoa ny borosy malefaka sy malefaka.
Fotoana fandefasana: Aug-04-2021
Barber Shave, borosy makiazy napetraka, Fitaovana borosy makiazy, Manaova borosy, Mametraha makiazy borosy, Faritra fiharatra,